IPHONE 7 NGOSIPỤTA NDOCHI - NTỤZIAKA - IOS NA MACOS - 2019
IPhone 7 Ngosipụta Ndochi - Ntụziaka
Ịgbanwe ngosipụta nke iPhone 7, yana ụdị ndị ọzọ, ọ ga-ekwe omume ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike n'ikike gị. Ruo ugbu a, enweghi ihe dị otú ahụ na saịtị a, ebe ọ bụ na nke a abụghị ezigbo nkọwa m, ma ugbu a ọ ga-abụ. Ntuziaka a site na nkwụsịtụ maka dochie ihe ngebichi agbajiri nke iPhone 7 bụ nke ụlọ ahịa dị iche iche nke ebe nchekwa maka igwe na laptọọpụ "Akseum" kwadebere, na-enye ha ala.
Enwere m nsogbu nke iPhone 7 na nsogbu kachasị njọ - iko nke ngosipụta ngosipụta ahụ gbajiri, mgbawa si n'akụkụ aka ekpe ala n'akụkụ dum. Ngwọta otu - anyị na-agbanwe agbaji maka ọhụrụ!
Nnyocha nke ọ bụla iPhone, malite na 2008 iPhone 3G nlereanya, na-amalite site na ịtọpụ abụọ screws dị na ala nke ngwaọrụ.
Dị ka ọ na-eme n'ọdịdị ndị ọzọ, a na-ejikọta akụkụ nke ngosipụta ngosipụta nke iPhone 7 na teepu mpempe akwụkwọ mmiri, mana n'ime ọrịa anyị, usoro agbanweela agbanweela ka okwu analogue, a kpochapụkwa teepu ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọ dị mkpa ka ị kpoo obere iko ahụ ọkụ iji kwado usoro nyocha.
Site na iji ala, malite na ala, anyị na-emepụta ọdịiche ebe anyị na-etinye spatula plastic ma jiri nlezianya bulie mgbakọ ngosi ahụ na etiti ahụ na mpaghara.
Ihe kachasị mkpa ga-abụ akara dị n'elu ekwentị. Odi ka anyi na-akwalite usoro ihe omumu anyi onwe anyi na, n'enweghi mmeghari ogbaghara, anyi na-ekpughe onye ahu ajuju dika akwukwo - akuku uzo abuo nke ekwenti di na ya. Ha ga-enwe nkwarụ.
Anyị na-amalite na mpempe mkpuchi nke loops, n'okpuru ya anyị na-ezo njikọ dị mkpa maka ngosipụta, ihe mmetụta na batrị. Ihe nkiri na ime na na motherboard gwara anyị na e weghachitela ekwentị ma rụọ ọrụ.
Anyị na-ekpuchi ihe nkedo nke nwere eriri na-agba mbọ - Apple na - eme ka ọnụ ọgụgụ nkwụnyeghachi na - arụ ọrụ na - anọghị na - anọchite anya ụlọ ọrụ ndị ọrụ gọọmentị na n'ụzọ ọ bụla ga - eme ka ọrụ ahụ dị ike, gụnyere maka nkwụsị aka nke nrụzi.
Nke mbụ, anyị na-ekpochapụ batrị, anyị achọghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ihe mberede.
Na-esote, kwụpụsịa okpukpu abụọ ahụ, ọ ka mma iji spatula plastic, nke mere ka ị ghara ịdọrọ njikọ elongated kama mebie kọntaktị.
Ọ na-anọgide na-ekpuchi eriri USB na igwefoto na earpiece - a na-ezobe njikọ njikọ ya n'okpuru ebe nchedo ọzọ, nke ihe nkedo abụọ nwere.
Gbanyụọ ma kpochapụ ngosipụta ngosipụta.
Anyị na-akwadebe akụkụ ọhụrụ - nhazi ngosipụta mbụ. N'okwu a, anaghị edozi onye na-anọchi anya ya, dịka ọkà okwu na akaghị n'ihu igwefoto, ihe mmetụta / igwe okwu, ọ ga-adị mkpa ka a kpụga ha n'aka onye ahụ gbajiri agbaji.
Anyị jikọtara eriri abụọ na ihe mmetụta na ngosipụta iji lelee akụkụ ọhụrụ, dịka nzọụkwụ ikpeazụ anyị jikọtara batrị ma gbanye ama.
Anyị na-elele foto ahụ, agba, nchapụta na ịdị mma nke azụ azụ, enweghi mkparịta ụka dị iche iche na-acha ọcha na ọchịchịrị.
Enwere ike ịchọta ihe mmetụta ahụ n'ụzọ abụọ:
Kwado niile njikwa njirimara, gụnyere ndị dị n'akụkụ (oghere ngosi site n'elu na akara site na ala), bọtịnụ, gbanwee. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịlele nhazi nke ihe mmetụta ahụ na-ebute site na ịdọrọ akara ngosi ọ bụla - akara ngosi ahụ ga-esochi mkpịsị aka site na ihu na ihu;
Kwado bọtịnụ nchebe pụrụ iche - Ngwa ntanetị - Ihe ntanetị - Nweta ohere zuru ezu - na, n'ikpeazụ, AssistiveTouch. Gbanwee ihe ntanye ike na bọtịnụ translucent ga-apụta na ihuenyo, na-azaghachi na ịpị na ịdọrọ, ọ ga-enye aka iji hụ ọrụ nke ogwe aka na mpaghara dum.
A na-enyocha ngosi a ma na-arụrịrịrịrị, nke pụtara na ọ dị mkpa iji nyefee ihe ndị dị na ihe ndị a na-ejikarị ejikọta ya na modul ahụ.
Ọ ga-adị mkpa ịnyefee:
Metal mkpụrụ dabeere na ngosipụta module;
Bọtịnụ "Home" ma jide ya;
Cable na igwefoto, igwe okwu, ihe mmetụta na kọntaktị nke ọkà okwu;
Onye na-ekwuchite okwu okwu okwu ma na-edozi ya.
Ụdị ndị isi
Anyị na-amalite site na nkedo n'akụkụ nke nwere ogwe nkwado - enwere 6 n'ime ha, 3 n'akụkụ nke ọ bụla.
Nke ọzọ na akara bụ bọtịnụ aka "Home", a na-eji ya na mpempe akwa na ihe nkedo anọ - debe ma wepụ ya.
Na-agbanye bọtịnụ bọtịnụ ma na-ehulata ya n'akụkụ, na spatula metal nke anyị ji nwayọọ jiri eriri teepu kpuchie eriri.
Na ihe atụ a, ewepụrụ bọtịnụ ahụ site n'aka, n'akụkụ nke ngosi ahụ, anyị ga-etinye ya na akụkụ ọhụrụ "site na njedebe".
Nzọụkwụ ọzọ bụ akụkụ elu - ya bụ, ọkà okwu, igwefoto na mkparịta ụka okwu mkparịta ụka. E nwere ugbua 6, 3 n'ime ha na-ejide ikpu okwu, 2 dozie ọkà okwu n'onwe ya na nkedo ikpeazụ na njikwa okwu nchebe.
Ọ dị mkpa: na-edebe iwu nke kposara, ogologo ha dị iche iche ma ọ bụrụ na enweghi nkwekọrịta nwere ike imebi ngosipụta ma ọ bụ iko.
Wepu mkpuchi metal, hapụ ọkà okwu ma gbanye cable ahụ na igwefoto n'akụkụ.
Echefula onye na-ebu plastik n'ihu igwefoto - ọ na-etinye n'ihu igwefoto n'ihu windo ma na-echebe ya site n'ájá, ma dozie ya na gluu.
Anyị na-agbapụ n'ahịrị aka, na-agbalị ka anyị ghara imebi ya, a na-agbanye ya na isi nke igwe okwu na kọntaktị na earpiece. Iji kwado usoro ahụ, ịnwere ike iwepụ ihe ngosipụta ahụ site na ala ma ọ bụ gbakwunye ntakịrị mmanya mmanya isopropyl.
N'ikpeazụ, anyị na-ekpochapụ mkparịta ụka okwu mkparịta ụka na onye na-ejigide plastik na mọọbụ / ọkụ ọkụ - anyị na-adụ ọdụ ka ị dozie ya na gluu.
Anyị na-ebufe ihe ndị a kwadebere na mmiri dị iche iche na mpaghara nke ọzọ, na-ekiri ebe niile nkedo na components dị iche iche.
Ebe ọ bụ na site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, iPhone ejirila nchịkọta, anyị ga-eweghachite ya, na nke a, nwere ihe pụrụ iche - ihe nkochi nchịkọta maka mgbakọ. Ọ ga-ewepụ mkpịsị ụkwụ, ọhụụ na-enweghị isi, a ga-echebekwa ya site na mberede mmiri na unyi.
Wepụ ihe nkiri mbupu na otu akụkụ ma tinye akwa teepu n'elu ebe a kpochapụrụ ma gbasaa nke ọma. Ike siri ike n'elu gburugburu ma wepụ ihe nkiri ikpeazụ - ihe niile dị njikere maka ntinye nke ngosipụta nzipụta ọhụrụ. Echefula iji dochie ihe mkpuchi na ịchekwa kposara.
Ihe niile na - arụ ọrụ. Anyị na-alaghachi ebe nkedo abụọ ahụ wee gaa na nlele ikpeazụ.
Atụmatụ ụfọdụ nwere ike ịbịaru aka mgbe ị dochie ihe nlele iPhone:
Debe ihe nkedo n'usoro nke nyocha ha na ebe ha choro: nke a ga-ewepu njehie na ihe omume nwere ike ime;
Were foto BỤGHỊ ịmalite: chekwaa onwe gị oge na akwara ma ọ bụrụ na ị na-echefuru ihe na ebe.
Malite na-ekpochi ngosipụta ahụ site na ihu - ihu abụọ dị na oghere pụrụ iche nke ikpe ahụ. Na-esote, oghere dị n'akụkụ, malite na n'elu na nke ikpeazụ, ala.
https://termotools.com ig.termotools.com © IOS na MacOS 2019